Tsy misy fanomezam-pahasoavana ambony kokoa na ambany kokoa
Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny, izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony, ka samy notolorany ny raharahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasainy niambina tsara» - Mar. 13:34.
Manao ny asa fanompoana ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra i Jesôsy, kanefa mitoetra eo amin'ireo mpiara-miasa Aminy ihany koa Izy. Izao mantsy no nambarany: "Ary izaho momba anareo mandrakariva, ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao" — Mat. 28:20. Izy no filoha ara-panahin'ny fiangonany eto an-tany. Irina fatratra ny hahita ny mambra, ho feno fahavononana hiara-miasa amim-pilaminana, ho fampandrosoana ny fanjakany. Nampifandimby mpiasa maro izay nandray fahefana avy taminy Ilay Mpampianatra Lehibe. Nifidy olona manan-talenta samihafa sy fahaiza-manao samihafa ho amin'ny asany Izy. Ny sasany amin'izy ireo dia mety ho olona tsy araka ny safidinao. Handalo fanandramana anefa ianao izay hitarika anao hahita fa manandratra olona izay heverinao fa ambany Andriamanitra. Rehefa hanomboka ny fitsarana ary hosokafana ny boky, dia maro ireo izay ho gaga ny amin'ny fomba fanombanan'Andriamanitra ny toetra. Ho hitan' izy ireo fa tsy mijery ny olona tahaka ny fijerin'ny olombelona Andriamanitra. Ho gaga izy ireo hahita fa tsy mitsara tahaka ny mpitsara olombelona Izy. Mamaky ny fo Andriamanitra. Fantany ny antony manosika ny hetsika ataon'ny olona iray, [...].
Mampiasa fanomezam-pahasoavana isan-karazany Andriamanitra eo amin'ny asany. Aoka tsy hisy mpiasa hieritreritra fa ambony noho ny an'ny mpiasa hafa ny fanomezam-pahasoavana ananany.
Aoka Andriamanitra no hitsara. Mitsapa sy mankasitraka ny mpiasany Izy, ary manombana ny fahaizany. Nametraka fanomezam-pahasoavana isan-karazany eo anivon'ny fiangonana Izy mba hahafahany manome ireo zavatra isan-karazany ilain'ireo saina maro, izay mifandray amin'ny mpiasany.
Nametraka ny asany amin'ny olona tsirairay Andriamanitra. Ny olona tsirairay dia tokony hanao ny asa izay napetrak'Andriamanitra taminy. Tsy mitovy ny fanomezam-pahasoavana sy ny toetry ny olona rehetra. Tokony hahatsapa ny hery manova avy amin'ny Fanahy Masina kosa anefa ny rehetra, mba hahafahany mamoa vokatra betsaka ho an'ny Tompo.
Tsy ny olona mitory ny filazantsara no mampahery vaika ny ezaka ataony ka mahatonga izany hahomby. llay Tanana tsy hita maso izay mijoro eo anilan'ilay mpanompo no mitondra faharesen-dahatra sy fiovam-po eo amin'ny fanahy. - BTS, 1 Nov. 1909.